#BIM - Naqshadeynta Birta ee Horreysa - Geofumadas
Baro qaabeynta qaab-dhismeedka adoo adeegsanaya softiweeriska naqshada sare ee 'steel steel Design'.
Naqshadeyn dhisme dhameystiran
Aasaaska, tiirarka qaabdhismeedka
Qorshayaasha iyo nashqadeynta
Macalinka ayaa sharraxaya dhinacyo ka mid ah fasiraadda sawirrada qaab-dhismeedka iyo sida loogu fulin karo qaabeynta saddex-geesood ah. Waxay sharraxaysaa sida loo abuuro naqshadaha daabacaadda oo si tartiib tartiib ah loo fahmo dhammaan amarrada walxaha dhismaha.
Koorsada waxaa ku jira faylal loo isticmaalay koorsada si loo sameeyo waxa ka muuqda fiidiyowyada.
Koorsada oo dhan waxaa lagu dabaqayaa hal mashruuc.
Post Previous«Previous Mohelada '' Digital Digital Terrain Model '' '' AutoDesk Recap 'iyo' Xaraash '
Post Next #GIS - Nidaamyada Macluumaadka Juquraafiyeed ee leh QGISNext »